Semalt: ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်အကျော်ကြားဆုံး Plugins ၁၀ ခု
၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခု၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုတိုးချဲ့ရန်အတွက် WordPress plugin တစ်ခုသည်တာဝန်ရှိသည်။ ၎င်းသည် e-commerce ဆိုက်များနှင့်ဘလော့ဂ်များအတွက်စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များကို PHP ပရိုဂရမ်ဘာသာစကားဖြင့်ရေးသားခဲ့သည်။ Plugins များသည်ကျွန်ုပ်တို့ဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့အရာများ၊ အရောင်များနှင့်အပြင်အဆင်အသစ်များကိုထည့်သွင်းရန်လွယ်ကူစေသည်။
အကောင်းဆုံး WordPress plugin ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်ရှုပ်ထွေးနိုင်သည်။ သို့သော် Semalt မှ ထိပ်တန်းကျွမ်းကျင်သူ Frank Abagnale ကယခုနှစ်တွင်အကျော်ကြားဆုံး WordPress plugin ၁၀ ခုကိုဆွေးနွေးခဲ့သည်။
၁။ Yoast မှ WordPress SEO
၎င်းသည် Yoast မှအကျော်ကြားဆုံးနှင့်အကျယ်ပြန့်ဆုံးအသုံးပြုထားသော WordPress plugins တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤ SEO plugin သည်ခေါင်းစဉ်များနှင့်ဖော်ပြချက်များကိုသင့်ဘလော့ဂ်ပို့စ်များတွင်ထည့်ရန်ကူညီပေးပြီး၊ ဂရပ်များနှင့် meta အချက်အလက်များကိုသင်ဖွင့်နိုင်သည်။ သင်၏စာမျက်နှာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုလည်းလုပ်နိုင်သည်။ xml sitemaps များကိုထုတ်ဝေနိုင်သည်။ ဤပြည့်စုံသော plugin နှင့်များစွာလုပ်နိုင်သည်။
BackupBuddy သည်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူပြီးဖော်ရွေသော WordPress plugin တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ဖိုင်များကိုအရန်ကူးရန်နှင့်သင်၏ဆောင်းပါးများကိုစီစဉ်ရန်ကူညီနိုင်သည်။ ထို့အပြင် BackupBuddy သည်သင်၏ဝဘ်ဆိုက်အကြောင်းအရာများကိုသူခိုးများနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်များမှကာကွယ်ရန်ကူညီသည်။ သင်၏ဖိုင်များကို Cloud နှင့်အခြားမှတ်ဉာဏ်တွင်သိမ်းထားသည်။
3. W3 စုစုပေါင်း Cache ကို
၀ က်ဘ်ဆိုဒ်၏အမြန်နှုန်းသည် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုတိုးတက်စေရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ W3 Total Cache ဖြင့်သင်သည်သင်၏ site ၏အမြန်နှုန်းကိုအမြင့်ဆုံးမြှင့်တင်နိုင်ပြီး၎င်းသည် loading time ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
WPForms သည်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသောနှင့်ယနေ့အထိအကောင်းဆုံး plugins တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အွန်လိုင်းပုံစံတည်ဆောက်သူများအားဆွဲချရန်ကူညီသည်။ သင့်အားအီးမေးလ်ကြေးပေးသွင်းမှုပုံစံ၊ ငွေပေးချေမှုပုံစံ၊ အမှာစာပုံစံနှင့်အခြားအွန်လိုင်းပုံစံများကိုအလွယ်တကူဖန်တီးနိုင်သည်။ သူရဲ့အခမဲ့ဗားရှင်းနဲ့လိုက်ဖက်ဖို့ကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းကပေးတဲ့ဗားရှင်းကိုလည်းစမ်းကြည့်နိုင်တယ်။
အကယ်၍ သင်သည်အီးမေးလ် (သို့) လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်သမားဖြစ်လျှင်သင် OptinMonster ကိုစမ်းသုံးကြည့်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော WordPress plugin ဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးသမားများကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။ ၎င်းသည်သင့်အားအီးမေးလ်လက်ခံရရှိသူအရေအတွက်တိုးပွားစေပြီးသင်၏စာရင်းပေးသွင်းသူကိုပျော်ရွှင်သော ၀ ယ်သူအဖြစ်ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။
Edit ကို Flow
Edit Flow ဖြင့်သင်၏ယခင်ရေးသားထားသောဆောင်းပါးများကိုအချိန်မရွေးပြင်ဆင်နိုင်သည်။ ဤ WordPress ပလပ်အင်သည်သင်အယ်ဒီတာ့အာဘော်များ၊ မှတ်ချက်များနှင့်ဘလော့ဂ်ပို့စ်များကိုပုံမှန်စီမံရန်ကူညီသည်။ သင်သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ၎င်း၏ setting များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြီးအကောင်းဆုံးသောရလဒ်များအတွက် content marketing မဟာဗျူဟာကိုစီစဉ်နိုင်သည်။
Soliloquy သည်တုန့်ပြန်မှုရှိသောဝက်ဘ်ဆိုက်များအတွက်အကောင်းဆုံး WordPress plugin ဟုပြောခြင်းကလုံခြုံမှုရှိသည်။ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏ SEO ကိုမထိခိုက်စေဘဲစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။ Plugin ကိုတပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူပြီးမတူညီသော slider များနှင့် Blazers များဖြင့်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
Sucuri သည်သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏လုံခြုံရေးနှင့်လုံခြုံရေးကိုစစ်ဆေးရန်ကူညီပေးသောပြည့်စုံသော plugin တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ဆိုဒ်များကိုဟက်ကာများသို့မဟုတ်ဗိုင်းရပ်စ်များတားဆီးရန်သင်တားဆီးလိုပါက၎င်းသည် Real-time alerts, လုံခြုံရေးစကင်နာများနှင့် malware ဖယ်ရှားရေး ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးရှိသော Sucuri ကိုရယူသင့်သည်။
9. Floating လူမှုဘား
Floating Social Bar သည်အကောင်းဆုံးဆိုရှယ်မီဒီယာ plugins များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ WordPress ဆိုဒ်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးမရေမတွက်နိုင်သောလူမှုမီဒီယာရွေးချယ်စရာများရှိသည်။ ဤပလပ်အင်သည်အသုံးပြုသူများနှင့်ပိုမိုထိတွေ့ရန်အသုံးဝင်သောလူမှုမီဒီယာလင့်များကိုထည့်သွင်းပေးသည်။
ဤပုံမှန် WordPress plugin တွင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိပြီးသင်၏ site မှတ်ချက်များကိုစီမံသည်။ ၎င်းသည်သင်၏ဆာဗာကိုမထိခိုက်စေဘဲလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးကိုလုပ်ဆောင်သောတတိယပါတီမှတ်ချက်ပေးသောပလပ်အင်ဖြစ်သည်။